ဖက်ရှင်အမျိုးသမီး turtleneck - knitwear, cashmere, ခေါက်ဆွဲ, ရှည်လျားစွပ်အိတ်
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ turtleneck - အရှိဆုံးဖက်ရှင်နဲ့စတိုင်
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ turtleneck - တိုင်းအလှတရားဗီရိုတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ် attribute က။ ကသငျသညျ, တစ်လောကလုံးမူရင်းနှင့်စိတ်ကူး lukbukov တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်ကဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်းများမဆိုအမျိုးအစားနှင့်အတူမထိုက်မတန်ဒါကစွယ်စုံမိန်းကလေးအရာများစွာကိုဖက်ရှင် autfit အလှဆင်။
အကြီးမားဆုံးဝယ်လိုအားဂန္အဝတ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် cardigan tucked ကော်လာနှင့်တင်းကျပ်စွာအင်္ကျီလက်နှင့်အတူဒဏ်ငွေပိတ်ထည်၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူအဆင်ပြေအပေါင်းတို့နှင့်အခြေအနေများတွင်သင့်လျော်သည်။ အမျိုးသမီးများနေ့နှစ်ဖက်စလုံးတလျှောက်ဖြတ်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များဖွဲ့စည်းအခြားမည်သည့်အရောင်, မိုနိုခရုမ်သို့မဟုတ် polychrome, အလှဆင်ဖဲကြိုး, ပန်း, paillettes, ဖောက်ထား, turtleneck ။
ASOS ။ အဘယ်အရာကိုအနိမ့်စျေးနှုန်းများနှင့်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ချောမွေ့ပြောင်လက်ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွဲ့သောအဝတ်အစားအစဉ်အလာကိုဗြိတိသျှအမှတ်တံဆိပ်, မပါဘဲဖြစ်နိုင်မည်နည်း အဆိုပါမော်ဒယ်များဂန္ဖြတ်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့မတ်မတ်အတွက်ဖြစ်စေ, သင့်လျော်သည်, တစ်ဦးပျော့ကြိုးနှင့်အတူပေါ့ပါးလမ်းပိုင်းထည်နှင့်ဖန်ဆင်းနေကြသည်။ ဂေါက်သီးနှင့်ပိုလို၏ကော်လာဝိညာဉျကိုမျိုး။
သတ္တိ Soul ။ အယောင်ဆောင်စစ် ဗြိတိန်စတိုင် ။ အဝတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများ။ အဆိုပါ Single-အရောင်အမျိုးပေါင်းအပြင်, တစ်ပါးလွှာဒေါင်လိုက်ချွတ်တွေနဲ့အလှဆင်ပနျးပှားကိုမြှအတွက်အဝတ်, ရှိပါတယ်။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့ turtleneck ထဲမှာပါတဲ့၏ချုပ်ပေးခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဖောက်သည်အသစ်နှင့်ဖန်တီးမှုတစ်ခုခုပေးထားပါတယ်။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအထောက်အထား - သိုးမွှေးနှင့် acrylic ၏ကြီးမားသော viscous "pigtail" နဲ့တစ်ဦး turtleneck စားဆင်ယင်, knitwear ကနေကောက်ပဲသီးနှံအဝတ်အစား, ပို. ပင်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ sexy င်း၏မွေခံရသောသူကိုပေးသော။
ချမ်းရာသီအတွက်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ။ ကြောင့်ပေါင်ခြံဧရိယာထဲမှာခလုတ်နှင့်အတူ fastens နွေးထွေးမှု၌သင်တို့၏နိမ့်ကိုပြန်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ wear စဉ်အတွင်းအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဖို့ဗီရို၏ဤဒြပ်စင်။ ကခန္ဓာကိုယ်မှ snugly ကိုက်ညီသောသွင်ပြင်လက္ခဏာ, လည်ပင်းအလတ်စားအမြင့်, ရှည်လျားသို့မဟုတ်အတိုစွပ်အိတ်သည်။ ဂျင်းဘောင်းဘီ, ဘောင်းဘီ, အဝတ်များနှင့်အတူဝတ်ဆင် မိုးပြာရောင်ခြုံငုံ ။ တစ်ဦးကအမျိုးသမီးအဖြူ turtleneck တစ်ဇိမ်ခံလေးဖန်တီးကူညီပေးသည်။ ယင်း၏တစ်လောကလုံးအရောင်အစီအစဉ်, ဘာပဲအရောင်၏သင့်လျော်သောအဝတ်အစားကြောင့်။
အမျိုးသမီးများ, အင်္ကျီ turtlenecks
သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ feature ဟာစက်ချုပ်ကာလအတွင်း acrylic, သိုးမွှေး, cashmere, မွေးအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရလဒ်မိုးရာသီဆောင်းဦးနှင့်အေးစိမ့်သောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနွေးတစ်ဦးနွေးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လည်ချောင်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ turtleneck သူမကမှန်ကန်စွာကောက်ယူနေပါတယ်တဲ့အခါမှသာအမျိုးသမီးတစ်ဦးအပေါ်ပြီးပြည့်စုံသောကြည့်:
"သစ်တော်" ။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု - အထက်ပိုင်းအသံအတိုးအကျယ်, အောက်ခြေထိန်းညှိကစားကြောင်း oversayz ။ ကြီးမားသောပဝါ၏ပုံစံကို-သင့်လျော်သောဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းရန်။ သငျသညျအသေးရင်ပတ်နှင့်ကျယ်ပြန့်တင်ပါးရှိပါကကကိန်းဂဏန်း၏အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏ချို့ယွင်းချက်များကိုဟန်ချက်မျှအောင်ကူညီပေးသည်။
"Hourglass" ။ ကိန်းဂဏန်း၏ဤအမျိုးအစားကိုသာမျက်နှာတို့အားဤသို့သောအဝတ်။ ဒါဟာဿုံသူမ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုပေါ်လွင်တစ်မီးမောင်းထိုးပြမတ်မတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်စရာမလိုဘဲကဝတ်ဆင်ပါကလုပ်နေတာတန်ဖိုးရှိသို့မဟုတ်မဟုတ်ပါဘူး။
"Inverted တြိဂံ" ။ tulle မာနထောင်လွှားသောအင်္ကျီနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့ turtlenecks တစ်ဦးကြည့်ဖန်တီးပါ။ ကျွန်မဘောင်းဘီဝတ်ဆင်လိုသလား? အလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟုမော်ဒယ်မှုဦးစားပေး။ ဒါဟာကြည့်ဖို့သင့်လျော်သည် ဂျင်းဘောင်းဘီရညျး ။
"Apple က" ။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု - လျောက်ပတ်မဟုတ်အဝတ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပြဿနာဧရိယာမှမုန်း၏စင်တီမီတာ၏စုံတွဲတစ်တွဲဖြည့်စွက်ခြင်း, image ကိုလုယူကြလော့။
2014 ခုနှစ်, ဖက်ရှင်-စက်မှုလုပ်ငန်းအလှတရားတစ်ခုလှိုင်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ပုံစံနှင့်အတူ elongated ပိန်အမျိုးသမီးရဲ့ချွေးထွက်ကျဉ်းဘောင်းဘီ, ဖြောင့်စကတ် MIDI အရှည် fit ။ အဲဒါကိုဂန္စတိုင်မှကြွလာသည့်အခါသူတို့၏ "ဒုတိယထက်ဝက်" အဝတ်နှင့်ရည်းစားအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟုလိမ့်မည်။ ကြော့အစုံ - Marlene Dietrich ၏စတိုင်လ်လည်းမှောင်မိုက်အမျိုးသမီး turtleneck နှင့်ဘောင်းဘီ။ စပျစ်သီးကိုထိတွေ့အလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟု၏ထို့အပြင်နှင့်အတူကြည့်ရှုမည် ဂျင်းဘောင်းဘီ sundress ။
100% မှာကြည့်ဖို့ပင်နှစ်စဉ်ဒီအအေးအချိန်အတွက်ကူညီရန်အဆင်ပြေတစ်လောကလုံးထုတ်ကုန် - သူတို့လို့ခေါ်ပါတယ်အဖြစ်အမျိုးသမီးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ turtleneck သို့မဟုတ်, badlony ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကရုံးအင်္ကျီတစ်စုံလင်သောအစားထိုးပါလိမ့်မည် autfit ။ ပြုပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အဘို့အမိုနိုခရုမ်ဘုန်း, ဂန္ဘောင်းဘီတစ်ဦးခဲတံစကတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ တူသောပေါ့ပေါ့? သို့ပြုလျှင်သင်၏ရွေးချယ်မှု - ကသားမွေးအင်္ကျီ, cardigan အတူအလှဆင်နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲတင်းကျပ်စွာဂျင်းဘောင်းဘီပါပဲ။ အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့် stylist သငျသညျအထူးတစ်ခုခုကွယ် boho စတိုင်ချောင်ဘောင်းဘီနှင့်ကြီးမားသောထုတ်ကုန်။
: elongated အမျိုးသမီး turtleneck ကဲ့သို့သောအရာများကိုအဖို့သဟဇာတအဖြည့်ဖြစ်လာ
မီဒီအရှည်စကတ်, ဒေါက်ဖိနပ်လား, ဒါမှမဟုတ်တုတ်ကျင်းကုတ်အင်္ကျီတစ် Low-key ကိုပုံရိပ်နှင့်ပါးလွှာသောစကတ်ကိုဖန်တီးဖို့နဲ့ပိုကောင်းတဲ့အဖြည့်ပတ်လည်ဂျာကင်အင်္ကျီ turtleneck မှကူညီပေးပါမည်။
တိုတောင်းသောအဝတ်, ဗုံးခွဲသူ, boxy-ဂျာကင်အင်္ကျီတစ်ခုသို့မဟုတ်အလင်းတုတ်ကျင်းအင်္ကျီသင်သည်မည်သည့်ပါတီမှာအာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟိုစေမည်။
ခေါင်းလောင်း-bottomed ဘောင်းဘီ, ဖိနပ်သို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူဖိနပ်တစ်ခါးပတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရှည်ဂျာကင်အင်္ကျီနဲ့အင်္ကျီ - ဖက်ရှင်ပုံရိပ်၏အခြားဗားရှင်း။
Drainpipe ဘောင်းဘီ, ယောက်ျားရဲ့စတိုင်ဘွတ်ဖိနပ်အနက်ရောင်သားရေအကျီသို့မဟုတ်ဂျာကင်အင်္ကျီ - ရုံ beatniks ပြီးခဲ့သည့်ရာစု၏ 50-ies မတ်မတ်, ဒါပေမယ့်အဝတ်အစား၏လူကြိုက်အများဆုံးပေါင်းစပ်မဟုတ်ပါဘူး။
ပျင်းရိခြင်းနှင့် turtleneck ပါးလွှာအမျိုးသမီးများ, ပျက်စီးလွယ်သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်ဣတ္ကြည့်ရှုပါ။ အဆုံးစွန်သောအိတ်နှင့်တူသောအောက်ခြေအတွက်ဖြည့်သင့်တယ်။ လမ်း-စတိုင်အဖြူ Sneaker သို့မဟုတ် birkenshtokami နှင့်အတူဤအလှတရားဝတ်ဆင်ရန်ချည်နှောင်။
ချွေးဘောင်းဘီသင့်ရဲ့ဗီရိုတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ဘာသာရပ်အဖြစ်အကြီးအကုမ္ပဏီပါစေ။ ထိပ်နဲ့အောက်ဆုံးတူညီတဲ့အရောင် palette ထဲမှာရှေးခယျြရမညျ။ ဒီမှာအဓိကအရာ - monotone မတ်မတ်။
Openwork အမျိုးသမီး turtleneck
ဇာ INSERT သို့မဟုတ် Openwork ၏ရှိသမျှနှင့်အတူ created အမျိုးသမီးစတိုင်ချွေးထွက်, ကြော့ရှင်း၏စစ်မှန်သောဂျ, ဣတ္, အသက်ဝိညာဉ်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကချက်ချင်းပိုကောင်းမဆို lukbuk များအတွက်အသွင်ပြောင်း။ ဒါဟာရင်ခုန်စရာစားဆင်ယင်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ openwork အလှဆင်အတွက်အမျိုးသမီးများအစဉ်အမြဲလူတို့အားဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုသတိနဲ့ဝတ်ဆင်သင့်ကြောင်းမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ မိမိအဆက်စပ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ openwork နှင့်အတူကျက်သရေပေါင်းစပ်မထားပါနဲ့။ ဂန္, ဖြောင့်အကျီတွေနဲ့သာရောမွှေပါ။ ရောင်စုံအဝတ်များနှင့်ထုတ်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူပေါင်းစပ်အပေါ်မညီကြောင်း။
မည်သည့်ဖိနပ်များနှင့်အဝတ်အစားများအတွက်သင့်လျော်သောအမြိုးသမီးမြားရဲ့ turtleneck နွေးကြားနေအရောင်များ;
ရွက်တိုင်-hevom တစ်ခုချင်းစီရာသီအများအပြား "bitlka" ၏တစ်ဦးအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပါးလွှာ-မော်ဒယ်များ၏လမ်းကြောင်းသစ်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ seductive ခါးဆစ်ကိုအလေးပေးသော။ သူတို့ကသွယ်လျငယ်ရွယ်မင်းသမီးနှင့်မော်ဒယ် parameters တွေကိုဝါကြွားမနိုင်တဲ့သူတွေကို fit ။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌ပယ်ရှင်းပြဿနာဒေသများမှအာရုံအာရုံပျက်, ခါးကိုအလေးပေးရန်လိုအပ်ပေသည်။ ယင်းတွင်ပွင့်လင်းအမျိုးသမီး turtleneck, ဒါပေမယ့်လည်းလူကြိုက်များမသာဖက်ရှင်-add ကြီးကြပ်မှူး ။ ထုတ်ကုန်များသိုးမွှေးအထည်ကနေဖန်ဆင်းတော်ကြပါတယ်။ သူတို့ကနှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်အလျားလိုက်အပေါက်နှင့်အတူ, ကော်-ကော်လာ, ကျယ်ပြန့်အင်္ကျီလက်နှင့်အတူ SNAP လာကြ၏။
ထိပ်တန်းဖက်ရှင်တွင်အမှုအရာမတူညီတဲ့ဖြတ်ထိုးပြီး။ ဤသည်ပါးလွှာသောအမျိုးသမီးနွေဦး, နွေကာလများတွင်ဝတ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သောအတိုဗားရှင်း turtleneck ။ သူတို့၏ "အိမျနီးခငျြးနိုငျငံ" အဝတ်တစ်ဦးမြင့်မားသောခါးနှင့်အတူဘောင်းဘီ, အခွားရှပ်အင်္ကျီဖြစ်လိမ့်မည်။ အမျိုးအစား "စိတ်ဝင်စားဖို့ထုတ်" တွင်ပထမဦးဆုံးအရာအရပျနေတဲ့ပန်းပုံစံ, ရရှိသွားတဲ့ ကျားသစ်ပုံနှိပ် "အင်္ကျီ" kolorbloking နှင့်။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့ Turtleneck အဝတ်အစားအတွက်စမ်းသပ်ချက်အဘို့ဒီဇိုင်း, ဒါကြောင့်အောက်ဆုံးအပေါ်တစ်ဦးခြားနားအရောင်နှင့်အတူကပေါင်းစပ်။
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ cashmere turtlenecks
soft ကိုရွှေ - ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကဒီဇာတ်လမ်းကိုခေါ်သောကြောင့်ယင်း၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံး:
အလွန်ပူနွေးအမျိုးသမီး turtleneck - သိုးမွှေးထက်ခုနစ်ကြိမ်ပူနွေး;
အမျိုးသမီးများနေ့နွေး turtleneck သိုးမွှေးအောက်ပါအားသာချက်များရှိသည်:
ရှေးခေတ်ကခုနှစ်, ပိုးအများဆုံးရှိခိုးပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကပိုးအဝတ်မှထူးခြားသောဖြစ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်:
အလွယ်တကူရောင်စုံပေမယ့်တိုင်းအလှတရားကသင်၏အရသာများအတွက်မတ်မတ်ကောက်နိုငျသောကွောငျ့။ အမျိုးသမီးများနေ့ turtleneck, အဖြူ, ပန်းရောင်, အနက်ရောင်နှင့်အခြားအရောင်မဆိုမတ်မတ်၌ကြီးသောကြည့် burgundy ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သူမကဖက်ရှင်ထဲကမသွားဘူးတစ်ပစ္စည်းချုပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ ထိုသို့အများကြီး crumpled ပိုးဥစ္စာဓန (ခြွင်းချက်: crepe georgette နှင့် chiffon) ကိုအောကျမေ့ရကျိုးနပ်သည်, မိုး (အရက်နှင့်အတူဖယ်ရှား) ကအပေါ်တစ်ဦးအစွန်းအထင်းကျန်ရစ်ထုတ်ကုန်လုယူနိုင်ပါတယ်။
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဘွတ်ဖိနပ် - အရှိဆုံးဖက်ရှင်နဲ့စတိုင်
ရက်ကွန်းဝံ Hood ၏ကုတ်အင်္ကျီ
ကုတ်အင်္ကျီ, duffle ကုတ်အင်္ကျီ
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ insulator တွင်လည်းဖိနပ်ခံစားခဲ့
ကော်လာနှင့်အတူဝတ်စားဆင်ယင် - အားလုံးအခါသမယများအတွက်တစ်ကော်လာနှင့်အတူလှပသောဆင်မြန်း 44 ဓါတ်ပုံ
သားအိမ်၏ကွေး - လက္ခဏာများ
Raspberry ၏ Compote
စကားပြန် Dream - အံသွားအဲဒီအိပ်မက်အနက်ကိုဘော်ပြဖို့ဘယ်လို?
Bob ကဖီး, 2014
တစ်အရသာအမဲသားအသည်းနှင့်ပျော့ချက်ပြုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို - နေ့ရက်တိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
အတ္ထုပ္ပတ္တိ Christina Asmus
မြင့်မားသောခါးနှင့်အတူခဲတံစကတ် - အားလုံးအခါသမယများအတွက်စတိုင်မော်ဒယ်များ 44 ဓါတ်ပုံ
Heparin နံ့သာဆီ - လျှောက်လွှာ
အမျိုးသမီးတွေအတွက်မြည်းပေါ်မှာဝက်ခြံ - အကြောင်းတရားများ